Nagu saabsan - Tiknoolajiyada Wax Lagu iibsado (Zhejiang) Co., Ltd.
Tiknoolajiyada Purking (Zhejiang) Co., Ltd.waxaa la aasaasay 2014, Waa shirkad xirfadle ah oo dhalaalaysa kulul oo isku-dhafan oo isku-dhafan cilmi-baarista, horumarinta, suuq-geynta, tababarka shaqaalaha iyo adeegga iibka kadib, Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 1000 mitir oo isku wareeg ah oo ka kooban dhismayaasha warshad. Xarunta iibka ee shirkaddu waxay ku taal Yiwu City, Gobolka Zhejiang. Xarunta wax soo saarka iyo isku imaatinku waxay ku taalaa Magaalada Dongguan, Gobolka Guangdong.
Waxaa saameeyay cudurka faafa ee sanadka 2020, maaskarada 'supplyof' ma dabooli karto baahida. Marka lagu daro xaaladda dhabta ah ee shirkadeena, waxaan go'aansanay inaan bilowno soo saarista sanka biriijka sanka ee waji-shareerka, taasoo gacan ka geysaneysa faafitaanka. Saldhigga waxsoosaarka wuxuu ku yaalaa isgoyska guojiantanginterse, Jiangnan Park, Lanjiang Street Development Economic Zone, LanxiCity, Jinhua City, Gobolka Zhejiang. Saldhigga wax soo saarka ee Dongguan waxaa loo qoondeeyay No. 38, Buxing Road, tuulada shigubuwei, Tangxia Town, DongguanCity, Gobolka Guangdong.
Shirkadda waa amanufacturer ee qalabka wax soo saarka koolo si toos ah isku dhafan R & D, wax soo saarka iyo iibka. Iyada oo saynis sare iyo tikniyoolajiyad iyo maarayn adag oo farsamo, shirkaddu waxay siisaa xirmo dhammaystiran oo xalal otomaatig ah otomaatig ah oo loogu talagalay warshadaha kulaylka dhalaalka kulul Waqtigan xaadirka ah, waxay u adeegtay in ka badan 400 shirkadood, oo ku lug leh warshadaha kabaha, warshadaha dharka, warshadaha baakadaha, warshadaha dahaadhka, warshadaha farsamada gacanta, warshadaha elektarooniga ah, gawaarida, iwm.
Ku tumashada mashiinka € feedhka mashiinka € Qalabka mashiinka CNCã € laser cutter.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira suuqyo gaar ah oo ku yaal Gobolka Zhejiang iyo Gobolka Guangdong, waxayna ku horumaraysaa dalka oo dhan.
Guul la taaban karoï¼šIibinta sanadlaha ah ee 10 milyan oo doolar.
Iibinta kahor:Hordhac dhammeystiran oo ku saabsan alaabooyinka shirkaddayada.
Iib ahaan:Bixi xalka xabagta otomaatiga ah ee ugu kalsoonida badan dhibaatooyinka dhabta ah ee u baahan in la xaliyo.
Adeegga iibka kadib:U soo bandhig xalal dhammaystiran dhibaatooyinka ka dhasha.